Mutevedzeri Meya Wang Wei'an nebato rake vakashanyira kambani-Kambani nhau-TAKUMI AUTO CHIKAMU
Mutevedzeri wameya Wang Wei'an nebato rake vakashanyira kambani iyi
NaLi Chenyu / hcfire360 Ndira
Mangwanani aNovember 19, Wang Wei'an, mutevedzeri wameya weZhuzhou City, akashanyira kambani iyi kuferefeta. Zhou Nanyang, Deputy Secretary General weZhuzhou Municipal People's hurumende, Liu Hui, mugari wekubatanidza, Chen Guangyun, mutevedzeri wasachigaro uye mukuru maneja wekambani, Cui bole, Secretary of the Party komiti uye Executive mutevedzeri mukuru maneja, uye Peng Yunhui, mutevedzeri mukuru maneja, akaperekedza kuferefetwa.
（Mutevedzeri Meya Wang Wei'an anonzwisisa kuona kunoonekwa maitiro）
Wang Wei'an nebato rake vakashanyira kambani yakangwara yekugadzira mutsara. Pedyo netambo yemuchina yekugadzira yemusangano mukuru wedunhu, Wang Wei'an aifarira kwazvo kuona inoongorora system. Chen Guangyun akaunza kuti iyo yekuona yekuongorora system yakagadziriswa nekambani yedu mukubatana neyechitatu bato. Kubudikidza nekuwanda kwemakona ekupfura, iyo algorithm kuenzanisa uye otomatiki kuzivikanwa kwakashandiswa kuona kana iwo chitarisiko chaikodzera. Iyo sisitimu yakavandudza zvakanyanya iyo yega yekuongorora kugona uye inozowedzerwazve Chinyorwa chekuona kuongorora.
（Mutevedzeri Meya Wang Wei'an anonzwisisa spark plug）
Mushure mekushanyira saiti, Wang Wei'an nebato rake vakaita musangano wekutsvagisa nevatungamiriri vekambani mukamuri yemusangano padanho rechina, ndokuteerera chirevo chaChen Guangyun nezve mamiriro nekambani matambudziko: pasi pekukanganisa kwedenda iri gore, kambani ichiri kubudirira nekusimba uye kugadzikana kukura mubhizinesi rayo guru, uye yakaita budiriro inoshamisa mukutsvagisa michina nekusimudzira uye chigadzirwa chitsva. Parizvino, yakaisa yakakwira-performance spark plug ceramic muviri uye nitrogen okisijeni sensors, nano silicon nitride uye zvimwe zvigadzirwa zvinotarisirwa kuumba nyowani yekukura kwehupfumi nzvimbo mune ramangwana. Wang Wei'an akatsigira zvakabudirira zvekambani mu-saiti manejimendi uye kutonga, otomatiki R & D kudyara, kugadzirwa uye kushanda manejimendi, uye akarumbidza kuedza kwekambani kumisikidza yavo yenyika chiratidzo uye kuona zvigadzirwa zvinoenda kunze kwenyika. Vakati Zhuzhou iguta rine maindasitiri rine maindasitiri mazhinji anobatsira, asi zvinonzwisa tsitsi kuti mamwe maindasitiri haana kutevedzera kumhanya kwenguva uye akapinda mukuderera uye akabviswa nemusika. Hazvisi nyore kuti kambani yespark plug ive yekutanga munyika. Kubudikidza nekuongorora uku, akadzidzawo kuti spark plug chaicho chigadzirwa nehunyanzvi hwehunyanzvi, hunobatanidza R & D uye hunyanzvi muzvinhu zvitsva, kugadzira uye kugadzira. Parizvino, indasitiri yemotokari ndeimwe yemaketani matatu makuru emaindasitiri akavakwa neZhuzhou City. Ndinovimba kambani icharamba ichiedza mukugadzira indasitiri yemotokari uye nekugadzira nzvimbo yepamusoro yekugadzira muZhuzhou. Panguva imwecheteyo, Wang Wei'an akaisa matauriro ekukumbira kwekambani kutsigirwa nehurumende kugadzirisa matambudziko akasara nenhoroondo panguva yekushandurwa kwemugove, uye vakasarudza Liu Hui naZhou Nanyang kuti vaite basa rakanaka mukubatana pakati pehurumende. uye mabhizinesi, kuti abatsire mabhizinesi kuwana nekukurumidza uye zvirinani budiriro.
Prev Peji: hapana
Inotevera Peji: Maindasitiri spark plug yekuwedzera tsvimbo zvigadzirwa